Erdogan Archives - Ceelhuur Online
Home > Posts Tagged Erdogan
July 8, 2018 July 8, 2018 admin709
Turkiga oo Cambaareeyey Qaraxyadii Shalay ka dhacay Muqdisho
July 8, 2018 admin572
War kasoo baxay Wasaaradda arrimaha dibedda Dalka Turkiga ayaa lagu cambaareeyay qaraxyadii mataanaha ahaa ee Shalay lala eegtay xarunta wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya ee Muqdisho. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay ka murugoonayaan Shacabkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay weerarkii gardarrada ahaa ee ay argagixisadu ka geysteen Muqdisha, iyadoo ehelada Dadkii ku Naf […]
Erdogan oo Todobadkan booqanaya Qaarada Afrika.
January 20, 2017 admin621
Madaxweynaha Turkiga Rajab Dayib Erdogan ayaa todobaadkan booqasho rasmi ah ku tagaya saddex dal oo ka tirsan qaaradda Afrika. Booqashada Erdogan ayaa bilaabanaysa maalinta Axadda, isagoo soo gaban gabey doona khamiista soo socota, Madaxweynaha ayaa labada maalmood 22,23 Janaayo joogaya dalka Tanzania, halkaas oo labada wadan ku kala saxiixanayaan heshiisyo ganacsi. Madaxweyne Erdogan ayaa lugta […]